न्युजिल्यान्डमा सगरमाथा दिवस- प्रवास - कान्तिपुर समाचार
जेष्ठ २८, २०७६ नारायण खडका
अस्ट्रेलिया — न्युजिल्यान्डको संसद् भवनमा पहिलोपटक सगरमाथा दिवस मनाइएको छ । न्युजिल्यान्डका नागरिक सर एडमन्ड हिलारी र नेपाली तेन्जिङ नोर्गे शेर्पाले सगरमाथामा पहिलो पाइला राखेको सम्झना स्वरूप हरेक वर्ष न्युजिल्यान्डमा ‘एभरेस्ट डे’ मनाइने गरिन्छ ।
संसद् भवनमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा न्युजिल्यान्डका मन्त्री, सांसदहरूका साथै एडमन्ड हिलारीकी श्रीमतीको समेत उपस्थिति रहेको थियो ।
कार्यक्रममा इथ्निक मन्त्री जेनी सालेसा, अन्डर सेक्रेटरी माइकल उड, सांसदहरू डङन वेब, मेलिसा ली, सिमिओन ब्राउन, प्रियंका राधाकृष्णनका साथै न्युजिल्यान्डमा रहेका नेपाली समुदायका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो । हरेक वर्ष प्रवासी नेपालीको संगठन एनआरएनले यो दिवस मनाउने गरेको भए पनि यस वर्ष नेप्लिज सोसाइटी अफ वेलिङटनको सक्रियतामा संसद् भवनमै पहिलोपटक आयोजना गरिएको आयोजक संस्थाका अध्यक्ष रमिल अधिकारीले जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा एडमन्ड हिलारीकी श्रीमती जुन हिलारीको उपस्थितिले कार्यक्रमलाई अझ रोचक बनाएको थियो । प्रायः सबै नेपाली कार्यक्रममा उपस्थिति जनाउने उनले नेपाल आफूलाई दोस्रो घर लाग्ने बताउँदै कार्यक्रम गरेकोमा आयोजकलाई धन्यवाद दिएकी थिइन् । कार्यक्रममा मन्त्री सालेसाले सगरमाथाको देशमा जन्मिएका नेपालीहरू भाग्यमानी भएको बताउँदै यस्ता कार्यक्रमले नेपाल र नेपालीको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउने बताएकी थिइन् ।
कार्यक्रममा नेपाल र न्युजिल्यान्डका साथै अन्य देशका व्यक्तिहरूले समेत सहभागिता जनाएका थिए । न्युजिल्यान्ड नेपाल सोसाइटीका अध्यक्ष दिनेश खडकाले यस कार्यक्रमले न्युजिल्यान्डमा नेपालीहरूको पहिचानलाई अझ फराकिलो बनाउनुका साथै नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनसमेत हुने बताए ।
प्रकाशित : जेष्ठ २८, २०७६ ०९:०६
लन्डन हिथ्रो विमानस्थल उत्रिदाँ ओली नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई बेलायती आर्मड फोर्सेस राज्यमन्त्री मार्क ल्यान्कास्टर, राजदूत डा. दुर्गाबहादुर सुवेदी लगायतले स्वागत गरेका थिए।
लगत्तै ओली नेपाली प्रतिनिधिमण्डलसहित अक्सफोर्ड युनियनको कार्यक्रममा सहभागी भए। लन्डनबाट करिब ५६ माइल टाढा अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुन उनीहरु हेलिकप्टरबाट पुगेका थिए।
कार्यक्रममा निर्धारित समयभन्दा एक घण्टा ढिलो पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले प्रश्नोत्तर सत्रमा सत्ता नछाड्ने संकेत गरेका छन्। अर्का पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अढाइ वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको बताइरहँदा ओलीले यसबारे पार्टीले निर्णय गर्ने बताउँदै सत्ता नछाड्ने संकेत गरेका हुन्।
ओलीले कुनै पनि छिमेकी मुलुकविरुद्ध नेपालको भूमि प्रयोग गर्न नदिने उद्घोष पनि गरे। भारत र चीन छिमेकीमात्र नभएर बजार समेत भएको उनले बताए।आर्थिक समृद्धि बिना प्रजातन्त्र दिगो नबन्ने बताउँदैप्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको शान्ति प्रक्रिया विश्वमै उदाहरणीय भएको जनाए।
४ सय बढी सहभागी उक्त कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले नेपालको शान्तिप्रक्रिया, लोकतन्त्र, विकास र समृद्धिका लागि सरकारको दीर्घकालीन योजना र प्राथमिकताबारे पनि आफ्नो धारणा राखेका थिए।
विदेशी भन्दा उल्लेख्य नेपाली समुदाय सहभागी उक्त कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पत्नि राधिका शाक्य, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल, परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराई, परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागी, राजदूत डा. दुर्गाबहादुर सुवेदी लगायत सरकारी अधिकारीहरु सहभागी थिए।
विश्व नेताहरु बोलाएर बहस गराउने अक्सफोर्ड यूनियनको एउटा पुरानो परम्परा नै छ। यूनियनको फोरममा अमेरिकी राष्ट्रपतिहरु रोनाल्ड रेगन, जिमी कार्टर, रिचर्ड निक्सन, बिल क्लिन्टन, ब्रिटिस प्रधानमन्त्रीहरु विन्सटन चर्चिल, मार्गरेट थ्याचर, डेभिड क्यामरुन, टेरेजा मे, पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खान साथै दलाई लामा, मदर टेरेसा, डिएगो म्याराडोना, माइकल ज्याक्सन जस्ता हस्ती उपस्थित भइसकेका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीको आज मंगलबार बेलायती समकक्षी टेरेजा मे र बेलायती राजकुमार हयारीबीच भेटघाट तय भएको छ। बुधबार फ्रान्स जानुअघि ओलीका भेटघाट र अन्तरक्रिया छन्।नेपालका प्रधानमन्त्रीको १७ वर्षपछि बेलायत भ्रमण भएको हो।